Amathrendi Wokumaketha Nge-Digital Martech Zone
NgoLwesithathu, Februwari 6, 2019 NgoLwesithathu, Februwari 6, 2019 Douglas Karr
Lesi isifinyezo esihle samathrendi amaningi ebesikade siwenza ngamakhasimende ethu - ukusesha okuphilayo, ukusesha kwasendaweni, usesho lweselula, ukumaketha ividiyo, ukumaketha nge-imeyili, ukukhangisa okukhokhelwayo, ukukhiqiza okuholayo, futhi ukumaketha kokuqukethwe Amathrendi abalulekile.
Kuyiqiniso elifanele ukuthi udinga ukungena kwizibalo zakamuva zokumaketha kwedijithali kanye nezindlela ezishisa kakhulu zesu lakho lokumaketha ledijithali ukuze uhlale usebenza ngo-2019 nangaphezulu. Amathrendi aphezulu ayi-7 Okufanele Uwazi Womkhankaso Ophumelelayo Wokumaketha ngeDijithali inenqwaba yezibalo zokumaketha ezingasebenza njengezeluleko eziqondile eziqondile zokucija imikhankaso yakho yezokumaketha, kufaka phakathi ukunquma ngobude obufanele bokuthunyelwe kwakho kwama-blog nama-imeyili noma ukwenza amaqhinga akho we-SEO asebenze kangcono.
Le mininingwane engakholeki ye-infographic ilungele konke okufanele inhlangano ngayinye icabange ngakho njengoba ithuthukisa isu labo lokukhangisa ledijithali futhi yenza imikhankaso yokulwa nayo. Kubandakanya:
Injini Yokusesha (SEO) - Lesi yisici esisodwa esibaluleke kakhulu kunoma yiliphi ibhizinisi ngoba kuseshwa izinhloso ezilinganayo. Uma ngifuna umkhiqizo noma insiza online, maningi amathuba okuthi ngikulungele ukuthenga. Ebusweni, ama-57% wabakhangisi be-B2B bathi amazinga wegama elingukhiye akhiqiza ukuhola okuningi kunanoma yisiphi esinye isinyathelo sokukhangisa.
Ukusetshenziswa Kwezinjini Zokusesha Kwasendaweni (i-SEO Yasendaweni) - Uma uyibhizinisi lendawo, ukubonakala kumephu ye-Google kubalulekile - 72% wabathengi abenze usesho lwendawo bavakashele isitolo ngaphakathi kwamamayela ama-5. I-Google Bhizinisi Lami manje yaziwa njengeyakho iwebhusayithi yesibili.
Ukusesha Kwamaselula - uhhafu wezwe ubheka izingcingo zabo ngaphambi kokuba bavuke embhedeni kanti ama-48% abo bonke abathengi aqala ucwaningo lweselula ngokusesha kudivayisi yabo. Ukusetshenziswa kwesikhangiso seselula kuyaqhubeka nokukhuphuka - kulinganiselwa ngaphezulu kwama- $ 20 billion.
Social Media Marketing - Umsebenzi wokuqwashisa nokukhulisa ngendlela eyisimanga kahle nangokwezikhangiso ezikhokhelwayo ku-Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest naku-LinkedIn. Akugcini lapho, ama-brand anethuba lokwakha imiphakathi yawo futhi ahlanganyele ngokweqiniso ezingeni lomuntu siqu nezizwe zawo.
Marketing Video - Anginayo iklayenti elilodwa engingalisebenzisi uhlobo oluthile lwecebo levidiyo. Ngakha isitudiyo sevidiyo seklayenti elilodwa levidiyo yomphakathi yesikhathi sangempela, nginevidiyo yangemuva ye-animated loop yesayithi lenye iklayenti esetshenzelwa kuyo, ngisanda kushicilela ividiyo echazayo enezinye iklayenti, futhi sikhiqiza umkhiqizo Indaba yevidiyo yelinye iklayenti. Ividiyo iyabiza futhi umkhawulokudonsa awusasebenzi uma ufinyelela izithameli zakho. I-43% yabantu ifuna ukubona okuqukethwe okuningi kwevidiyo kubathengisi!
imeyili Marketing - Ama-imeyili abandayo ayaqhubeka nokuqwashisa namathuba amaqembu okuthengisa. Ukwehlukaniswa nokwenza ngezifiso kuqhubeka nokuvuleka okukhulu namazinga wokuchofoza. Ama-80% wabasebenzisi be-imeyili afinyelela kuma-akhawunti we-imeyili kumadivayisi wabo weselula, ngakho-ke ukwakheka okuphendulayo kweselula kufanele.
Ukukhangisa okukhokhelwayo - njengoba inani leziteshi nezindlela landa, nokufunda komshini nobuhlakani bokufakelwa kuthuthukisa ukubekwa nokunciphisa izindleko, ukukhangisa okukhokhelwayo sekuqala ukusebenza kakhulu kunakuqala. Ukusesha okukhokhelwayo, okuqukethwe okukhokhelwayo komphakathi, okuqukethwe okuxhasiwe, izikhangiso zamavidiyo, kanye nethoni lezinye izinketho zikhona lapho izinkampani zingasebenzisa khona.
Generation Generation - Isidingo sokwakha esinamakhasi okufika asetshenziselwe ukuguqulwa kanye nemikhombandlela yokushayela lapho ngokuhlela ngokucophelela, okuzenzakalelayo, nokuqondisiwe kwamakhasimende sekuba ngenye yamasu wokumaketha edijithali asebenza kakhulu kule minyaka eyishumi.
Ukukhangisa Okuqukethwe - abathengi namabhizinisi ngokufanayo bayaqhubeka nokuziqondisa futhi bacwaninge ukuthenga kwabo okulandelayo online. Ngomsindo ongaka laphaya, izinkampani ziphoqeleka ukuthi zitshale isikhathi esiningi namandla ekwakheni okuqukethwe empeleni okushayela imiphumela, kepha lapho bekwenza, kuyindlela ephumelelayo futhi engabizi kakhulu yokuheha amakhasimende.
Nayi i-infographic ephelele, ukuqiniswa okukhulu kokukhula namasu okufanele ngabe ibhizinisi lakho liwathumela:
Tags: umlobiUkukhangisa Okuqukethweukubhala kwe-googleukukhangisa okuhambayoukumaketha amaselulaSocial Media Marketing
Amathrendi amane we-E-Commerce Okufanele Uwamukele
May 22, 2013 ku-3: 34 AM
I-infographic enhle ebukeka! Siyabonga ngokwabelana nathi ngalokhu.
May 22, 2013 ku-6: 43 AM
Umsebenzi omuhle, uDoug. Akulula ukuthola zonke lezi zinkambiso zakamuva nedatha yokusekelayo ibe yinto ebonakalayo emfushane. Ngiyabonga!
May 23, 2013 ku-8: 33 AM
Le infographic enhle impela. Kepha bekungezona yini lezi zinto eziqondile futhi ezibikezelayo zango-2012? Ngiqonde ukumaketha kwamaselula, ukumaketha okuqukethwe, imithombo yezokuxhumana - ngaphandle kwesikhundla sombhali.
May 23, 2013 ku-9: 21 AM